ကျန်းမာရေး | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label ကျန်းမာရေး. Show all posts
အနံ့ဆိုး ထွက်တဲ့ ငါးအမှုန့်ကြိတ် စက်ရုံတွေကို ပိတ်သိမ်းတဲ့ အထိ အရေးယူမည်
တနင်္သာရီ တိုင်း ဒေသကြီး မြိတ်မြို့က ငါး အမှုန့်ကြိတ် စက်ရုံနဲ့ ပထော်ပထက် ကမ်းမှာရှိတဲ့ ငါးအမှုန်ကြိတ် စက်ရုံတွေ ကနေ အနံဆိုးတွေ ထွက်လာရင် စက်ရုံတွေ ပိတ်သိမ်းတဲ့ အထိ အရေး ယူမယ့် အပြင် တည်ဆဲ ဥပဒေတွေ နဲ့ပါ အရေးယူ သွားမယ်လို့ တိုင်းဒေသကြီး သယံဇာတနဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်း ကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီး ဦးမြင့်မောင်က ဒီနေ့ ပြောလိုက် ပါတယ်။
၀န်ကြီး ဦးမြင့်မောင်က ဒီနေ့ ကျင်းပတဲ့ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ ပြောကြား ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ မြိတ်မြို့နယ် အမှတ် ၂ တိုင်း ဒေသ ကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ရီရီချို က ပြောပါတယ်။
ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ ဒုတိယအကြိမ် ပဉ္စမပုံမှန်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ ဒေါ်ရီရီချိုက မြိတ်မြိုပေါ်ရှိ အနံဆိုးတွေ ထွက်နေတဲ့ ငါးအမှုန်ကြိတ်စက်ရုံနဲ့ ရာဘာ စက်ရုံကို ဘယ်လိုအရေးယူမလဲလို့ မေးမြန်းရာမှာ ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ် ပါတယ်။
မြိတ်မြို့ပေါ်မှာ ထူးထူးတိုး၊ ဗင်းတေ့ခ်ျ၊ မင်းဇာနည်နဲ့ အဆောင်ကောင်းစတဲ့ ငါးအမှုန့်ကြိတ်စက်ရုံ လေးရုံနဲ့ မြိတ်တဖက်ကမ်း ပထော်ပထက်ကျွန်း မှာ အောင်မြတ်ဖြိုး ငါးမှုန့်ကြိတ်စက်ရုံ ၁ရုံ စုစုပေါင်း ၅ရုံရှိပါတယ်။
ငါးအမှုန့်ကြိတ်စက်ရုံတွေအနေနဲ့ အနံဆိုးတွေမထွက်အောင် ငါးဖမ်းလှေတွေကဖမ်းမိတဲ့ ပါကေး ငါးတွေကို ပင်လယ်ရေနဲ့ စင်ကြယ်အောင်ဆေး ပြီး ရေခဲ အလုံအလောက်ထားဖို့၊ ဖမ်းမိတဲ့ငါးတွေကို ၁၀ ရက်အတွင်း အရောက်ပို့ဖို့၊ စက်ရုံထွက်အငွေ့တွေကို အနံ့သတ်စနစ်အသုံးပြုပြီး သန့်စင်ထုတ်လွှတ်ဖို့ စတဲ့ အချက် ၇ချက်ကို ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနက ညွှန်ကြားထားပါတယ်။
ငါးအမှုန့်ကြိတ်စက်ရုံတွေက အနံ့ဆိုးတွေထွက်တာကြောင့် မြိတ်ဒေသခံတွေက စက်ရုံတွေကို အရေးယူပေးဖို့ ဆန္ဒပြတာ၊ လက်မှတ် ရေးထိုး တောင်းဆို တာတွေ ပြီးခဲ့တဲ့ အစိုးရ လက်ထက် ကတည်းက ပြုလုပ် ခဲ့ပါတယ်။
မြိတ်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ ဖိုးလမင်းရာဘာကုမ္ပဏီကိုတော့ အနံဆိုးတွေထွက်တာကြောင့် မြိုအပြင်ဘက် မိုင်၂၀အကွာမှာရှိတဲ့ ပင်းအိုကျေးရွာမှာ ပြောင်းရွှေ့ လုပ်ကိုင် ခိုင်းထား တယ်လို့ ဝန်ကြီး ဦးမြင့်မောင်က ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
From : အာအက်ဖ်အေမြန်မာသတင်းဋ္ဌာန
Originally published at - http://www.rfa.org/burmese
မျှဝေသူ ရစ် မောင် မှာ Thursday, June 29, 2017 No comments:
ကဏ္ဍ ကျန်းမာရေး, ပြည်တွင်းသတင်း
တော်တော် များများက အဝလွန် တာနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် ပုံမှန်ထက် ပိုများနေ တာက ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက် စေနိုင်တယ် လို့ပဲ သိထား ကြပါတယ်။
လေ့လာမှု အသစ် တစ်ရပ် မှာတော့ ကိုယ်အလေးချိန် ပုံမှန်ထက် ပိုများနေ တာက ဆီးချို ဝေဒနာ ခံစားနေ ရတဲ့ သက်ကြီး ရွယ်အိုတွေ အတွက် အကျိုး ရှိစေနိုင် တယ်လို့ တွေ့ရှိ ခဲ့ပါတယ်။
သည်လေ့လာမှုကို ပူးတွဲ လုပ်ဆောင်သူဖြစ်တဲ့ ဘေဂျင်းရှိ Capital Medical တက္ကသိုလ် An Zhen ဆေးရုံက သုတေသီ Yu Jie Zhou နဲ့ အဖွဲ့ဟာ သူတို့ရဲ့ တွေ့ ရှိချက်တွေကို Diabetes Investigation ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြခဲ့ ပါတယ်။
ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ ကာကွယ်ရေးစင်တာ (CDC) ရဲ့ စာရင်းဇယားတွေအရ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ပြည်သူ ၂၉.၁ သန်းဟာ ဆီးချိုရောဂါခံစားနေ ရပြီး အများစုကသက်ကြီွးယ်အိုတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ရောဂါခံစားနေရသူတွေထဲက ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာ အသက် ၆၅ နှစ်နဲ့အထက်လူကြီးတွေဖြစ် ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ကိုယ်အလေးချိန် ပုံမှန်ထက် ပိုများနေတာက ဆီးချိုရောဂါခံစားရနိုင်တဲ့အဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ် နဲ့ သူ့ရဲ့အဖွဲ့ဟာ အမျိုးအစား-၁ ဆီးချိုရောဂါနဲ့ အမျိုးအစား-၂ ဆီးချိုရောဂါခံစားနေရသူ ၂၅၀,ဝ၀ဝ ကျော်ပါဝင်နေတဲ့လေ့လာမှုပေါင်း ၂၀ ကျော်က အချက်အလက်တွေကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။
သုတေသီတွေဟာလေ့လာ မှုမှာပါဝင်သူတွေရဲ့ BMI ကို အကဲဖြတ်လေ့လာခဲ့သလိုကိုယ်အလေး ချိန်နဲ့ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် သေဆုံးနိုင်ခြေတို့ကြား ဆက်စပ်မှုရှိနေလားဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ လေ့လာမှုကို နှစ်နှစ်နဲ့ ကိုးလကနေ ၁၆ နှစ် ခုနစ်လကြာလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
လေ့လာမှုအတွင်း BMI အရ အဝလွန်နေတဲ့သူတွေဟာ ပုံမှန်ကိုယ်အလေးချိန် BMI ကိုပိုင်ဆိုင် ထားသူတွေနဲ့နှိုင်းစာရင် အခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် သေဆုံးနိုင်ခြေကျဆင်းနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
ဆီးချိုဝေဒနာခံစားနေရတဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုတွေမှာ ကိုယ်အလေးချိန်ပုံမှန်ထက်ပိုများနေတဲ့ သူတွေဟာ ပုံမှန်ကိုယ်အလေးချိန်သာရှိသူတွေထက် အခြေ အနေ အရပ်ရပ်ကြောင့် သေဆုံးနိုင်ခြေဟာ ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းလောက် လျော့နည်းနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ ရပါတယ်။
[ref: MNT, Jun 12, 2017.]
From : ကုမုဒြာဂျာနယ် by: မအေးသီမွန်
Originally published at - http://www.kumudranews.com
ကဏ္ဍ ကျန်းမာရေး, လေ့လာတွေ့ရှိချက်
လေ့ကျင့်ခန်းလွတ် အစားအစာနဲ့ စားသောက် နည်းများ
ကျနော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ရေဓာတ် အပါ အဝင် အစား အစာ ကနေ ရရှိတဲ့ အာဟာရ ဓာတ်တွေနဲ့ တနေ့တာကို အ ကောင်းဆုံး ဖြတ်သန်းပြီး ရှင်သန်နေ ကြတာပါ။ အဲဒီမှာ အစာ ကနေ ရရှိတဲ့ အာဟာရ ကိုတော့ ကယ်လိုရီနဲ့ တိုင်းတာ ပါတယ်။
တနေ့တာ လိုအပ်တဲ့ ကယ်လိုရီထက် ပိုပြီး များများ စားမိ၊ စုမိ လာရင်တော့ မကြာခင်မှာ သင်ဟာ ၀ လာ ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလို မ ဝအောင် ကယ်လိုရီ အပို မရှိဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။
အကောင်းဆုံး ကတော့ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေး ဖို့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဖို့ အချိန်နည်း သူတွေ၊ ပျင်းသူတွေ အတွက် အစာထဲမှာ ကယ်လိုရီကို လောင်ကျွမ်း စေမယ့် အစာတွေ ရောနှော စားပေးမယ် ဆိုရင် လေ့ကျင့်ခန်းချိန် သက်သာစေ ပါလိမ့် မယ်။ ဘယ်လို အစာတွေ ရောစားပေး သင့်ပါသလဲ။
(၁) အခါးရွက်တွေကို အစိမ်းလိုက် ရောစားပါ
အစိမ်းလိုက်စားရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အစိမ်းလိုက် စားဖို့ အဆင်မပြေရင် အစိမ်းရောင် မပျောက်အောင် ကြော်၊ ပြုတ်၊ စားလို့ ရပါတယ်။ ခါးသက်တဲ့ အရွက်တွေကို စားပေးနိုင်ပါတယ်။ ကြက်ဟင်းခါးရွက်၊ ဂွေးတောက်ရွက်တွေ အစ ကိုက်လန်လို အနည်းငယ်ပဲ သက်ချင်တဲ့ အရွက်တွေကိုပါ စားပေးနိုင်ပါတယ်။
(၂) ချိစ်ကို အစိမ်းစားပါ
အစိမ်းလို့သာ ဆိုရတာ တကယ်တော့ ချိစ်ဟာ ဒီအတိုင်း စားလို့ ရတဲ့ အစာ တခုပါ။ ဆိုလိုတာကတော့ အပူပေး၊ ပေါင်းခံ၊ ချက် ပြုတ် စားခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ ချိစ်ကို အထုပ်လိုက် ဝယ်ပြီးသား အတိုင်း စားသုံးပေးခြင်းကို ဆိုလိုတာပါ။
(၃) အုန်းဆီ စားပေးပါ
ပြည်တွင်းမှာတော့ အရင်က စားအုန်းဆီတွေ မဝင်ခင်က ဖြည့်စွက်ဆီအဖြစ် အသုံးပြုသူ တချို့ ရှိပါတယ်။ အခုတော့ စား သုံးပုံစံအဖြစ် မစားကြတော့ပါ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် အုန်းဆီဟာ အစာချေစနစ်မှာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းကို အဆီအနေနဲ့ မဝင်ဘဲ စွန့် ထုတ်စနစ်ဆီကို အမြန်ရောက်သွားတတ်လို့ အဆီပို မဖြစ်စေဘဲ ဆီစား မယ်ဆိုရင် အုန်းဆီကို စားပေး နိုင်တယ်လို့ လေ့လာ ချက်တွေ အရ သိလာရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၄) အချဉ်ဖတ် စားပေးပါ
အကောင်းဆုံးကတော့ ဂေါ်ဖီချဉ်ပါ၊ ဒါမှမဟုတ် ပြည်တွင်းမှာ အချဉ်မျိုးစုံ ပြုလုပ်စားသုံးသလို မုန်လာဥ၊ အရွက်၊ အစုံကို အချဉ် လုပ်ပြီး စားပေးနိုင်ပါတယ်။ အစာအိမ်တွင်း ချေဖျက် စနစ်ကို ပိုမို ကောင်းမွန်စေပြီး ကယ်လိုရီ အပို ဖြစ်စေမှု နည်း စေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
(၅) ပန်သီးနဲ့ ထုတ် ရှာလကာရည် သောက်သုံး ပေးပါ
ပျားရည်နဲ့ ရောစပ်ပြီး သောက်သုံး နိုင်ပါတယ်။ မနက် အိပ်ယာထ၊ ညအိပ်ရာဝင် အချိန်တွေမှာ တရက် တကြိမ် စားပွဲတင် တဇွန်းစာပဲ ပုံမှန် သောက်သုံး ပေးရင် ရပါတယ်။ အလေးချိန် ကျစေဖို့ အကောင်းဆုံး အကူညီပေး အစာလို့ သတ်မှတ် ထား တာပါ။
ကော်ဖီသောက်ခြင်း တမျိုးတည်း မဟုတ်ဘဲ ကာဖင်းဓာတ် ပါရှိတဲ့ အစာတွေကို ပုံမှန် သင့်ရုံ စားသောက်ပေးရင် ရပါတယ်။ သူက ကယ်လိုရီ အပိုကို လောင်ကျွမ်း စေမှုထက် ကယ်လိုရီ အပို ဖြစ် မလာအောင် ထိန်းပေးနိုင်မှု အားကောင်းတာ တွေ့ရ ပါတယ်။
(၇) ကင်ချီ စားပေးပါ
သူ့မှာ အစပ်၊ အချဉ်နဲ့ အရွက်ရဲ့ဓာတ် သဘောတွေ ကောင်းကောင်း ပါရှိလို့ စားသုံး ပေးဖို့ အဆင်ပြေပါတယ်။ အစာချေ စနစ်ကို အားကောင်း စေပါတယ်။ သင့်ရုံ ပုံမှန် စားသုံးပေး သင့်တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
(၈) ဒိန်ချဉ် သီးသန့် သောက်ပါ
ပြည်တွင်းမှာတော့ ဒိန်ချဉ်ကို ထန်းလျက်ရည် ဒါမှမဟုတ် သကြားရည်နဲ့ ရောသောက် ပါတယ်။ တချို့လည်း အသီးအနှံနဲ့ ရောစပ် သောက်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး ကတော့ ဒိန်ချဉ်ကို ဒီအတိုင်း သောက်ပေးပါ။ အစာချေ စနစ် အတွက် အကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယား ပါဝင်မှု အထူး များပြား ကောင်းမွန်စွာ ပါရှိလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(၉) ငရုတ်သီး စားပေးပါ
အမှုန့်အနေအထားမှာ ရောစပ် ဓာတုပစ္စည်း ပါရှိနိုင် တာကြောင့် ငရုတ်သီး အတောင့်ကို ပုံမှန် သင့်ရုံ စားပေးတာ အကောင်း ဆုံးပါ။ သွေးတွင်း သကြားဓာတ် အပါ အဝင် အဆီကိုပါ ချေဖျက် ပေးနိုင်ပြီး ကယ်လိုရီ အပိုကို လောင်ကျွမ်း စေနိုင် ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံ ဒီဇိုင်း-ကျော်မျိုးထိုက်/ ဧရာဝတီ
From : ဧရာဝတီ by ချစ်ဖေ (တောင်တွင်းမြေ) 18 June 2017
Originally published at - =source=
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, June 18, 2017 No comments:
ကဏ္ဍ ကျန်းမာရေး, အစားအစာ
နေပြည်တော်မှာ အထူး ထိန်းချုပ်ဆေးနဲ့ စပ်ဆေး ရောင်းချသူတွေကို ဖမ်းပြီ
နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၁၄ - နေပြည်တော် တပ်ကုန်း မြို့မဈေး အတွင်း က ဆေးဆိုင် နှစ်ဆိုင်မှာ အထူး ထိန်းချုပ်ဆေးနဲ့ စပ်ဆေးတွေ ရောင်းချ နေတာကြောင့် အမျိုးသား ဆေးဝါး ဥပဒေ ပုဒ်မနဲ့ အမှုဖွင့် အရေးယူ ပါတယ်။
ပထမ တစ်ခေါက် အနေနဲ့ တပ်ကုန်းဈေးကို အစား အသောက်နှင့် ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေး ဌာန(FDA) က သွားရောက် စစ်ဆေးတဲ့ အခါအဲ သည်ဆေးတွေ ရောင်းချ နေတာကို တွေ့ရှိလို့ နောက်ထပ် မရောင်းချဖို့ မှာခဲ့ပြီး ဝန်ခံ ကတိ ထိုးခိုင်း ခဲ့တယ်။ အဲသည်ဆိုင် နှစ်ဆိုင်စလုံးက ဆက်လက် ရောင်းချနေ တာကြောင့် အမှုဖွင့် အရေးယူ ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန် ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာထွန်းလင်းအောင်က အရင်တစ်ခေါက်တုန်းက စပ်ဆေးပဲတွေ့တာ ခံဝန်ကတိထိုးခိုင်းခဲ့တယ်၊ မနေ့က(ဇွန် ၁၃) သွားစစ်လိုက်တော့ မှတ်ပုံမတင်တဲ့ ဆေးတွေ၊ ဒိတ်လွန်တွေ တရား မဝင်တဲ့ဆေးတွေ အကုန်တွေ့တယ်၊ အဲဒါကြောင့် ပစ္စည်းသိမ်းပြီး လူပါ တစ်ခါတည်း အချုပ်ထဲ ထည့်ပြီး အမျိုးသားဆေးဝါး ဥပဒေနဲ့ အမှုဖွင့် ထားပါ တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဇွန်လဆန်းပိုင်းက နေပြည်တော်ရှိ လူစည်ကားတဲ့ဈေးတွေကို အဓိကထားပြီး စစ်ဆေးရာမှာကျည်တောင်ကန်ဈေးအတွင်းမှာ လည်း စပ်ဆေး အများ အပြားရောင်းချ နေတာတွေ့ရ ပါတယ်။
ထိန်းချုပ်ဆေး၊ အထူးထိန်းချုပ်ဆေးဆိုတာက မူးယစ်စေတတ်တဲ့ (No 4)လို ဆေးဝါးတွေဖြစ်တယ်။ အဲသည်လိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဆေး တွေကိုထိုးဆေးရော၊ စားဆေးတွေပါတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
တစ်နိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်းက အမျိုးသားဆေးဝါးဥပဒေ နဲ့ တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုပေါင်း ၄၀ ကျော်ရှိပါတယ်။
၂၀၁၆ ဖေဖော် ဝါရီကနေ ၂၀၁၇ ဖေဖော်ဝါရီလအထိ တရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့အမှုပေါင်း ၉၉ မှု အမှုဖွင့်အရေးယူ ခဲ့တယ်လို့ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနက သိရပါတယ်။
အမှုဖွင့်အရေးယူခံရတဲ့သူဟာ ဥပဒေအရထောင်ဒဏ် ငါးနှစ်အထိ ကျခံနိုင်ပြီး တရားသူကြီး ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ နှစ်အကန့်အသတ် လိုက်ပြောင်းလဲချမှတ်နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
From : ကုမုဒြာဂျာနယ် by မိုးမိုး
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, June 17, 2017 No comments:
ကြွက်တက်ရင် ချက်ချင်း ကုသနိုင်မယ့် နည်း
ကြွက်တက် ရတဲ့ အကြောင်း အရင်း မြောက်များစွာ ရှိပါတယ်။ အဖြစ် အများဆုံး အချက်တွေ ကတော့ ဗီတာမင်ချို့တဲ့ တာနဲ့ ကြွက်သား အသုံးပြု လှုပ်ရှားမှု များလွန်းတာ တွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ကြွက်သားတွေကို အလွန် အကျွံ အသုံးပြု ရတဲ့ အားကစား သမားလို လူမျိုးတွေမှာ အဖြစ်များ ပါတယ်။
ခြေထောက်မှာ သွေးလျှောက် မှုအား မကောင်း လို့လည်း ဖြစ်တတ် ပါတယ်။ ရေဓာတ် ခန်းခြောက် လို့လည်း ဖြစ်တတ်ပြီး မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ကယ်လ်ဆီယမ်နဲ့ ပိုတက်ဆီယမ် ဓာတ်တွေ ချို့တဲ့ တာကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ် ပါတယ်။
ဆေးဝါး ကြာရှည် သောက်သုံး ခြင်းကနေ ဖြစ်လာတဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးတွေ ကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ် ပါတယ်။
ကြွက်တက်လာတဲ့ အခါ ဒီအချက်တွေနဲ့ ချက်ချင်း ကုသလို့ ရပါတယ်။
ကြွက်တက် လာတဲ့ အခါ အကြောဆန့်ဖို့ ကြိုးစားပါ။ အကြောဆန့်တယ် ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ရှုပ်ရှုပ် ထွေးထွေး လုပ်စရာ မလိုပါဘူး။ နံရံ တစ်ခုမှာ ကပ်ရပ်ပြီး ခြေထောက်ကို ဆန့်ထားရင်ပဲ အဆင်ပြေ ပါတယ်။
ကြွက်သား ဖြေလျော့ခြင်း ကလည်း အကူအညီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြွက်တက် လာတဲ့ အခါ ကြွက်သားတွေကို ညှစ်ထား တာမျိုးက ပိုဆိုးစေပါတယ်။ ဒီ့အစား ခြေထောက် ကြွက်သားတွေကို ဖြေလျှော့ ခွင့်ပြုပါ။
ကြွက်တက် ချိန်မှာ သင်နဲ့ အတူ အခြား တစ်ယောက်ရှိတယ် ဆိုရင် ကြွက်တက်တဲ့ နေရာကို နှိပ်ပေးပါ။ ကြွက်တက်မှုကို ပြေလျော့ စေပြီး နောက်ပိုင်း ဖြစ်ပွားမယ့် နာကျင်မှုကို တိုက်ခိုက် ရာမှာ အကူအညီ ဖြစ်ပါတယ်။
အရိုးရှင်းဆုံး နည်းလမ်း ကတော့ ကြွက်တက် လာတဲ့ အခါ ခြေမကို ချိုးပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချိုးတဲ အခါမှာ ခြေမတွေကို ပြေလျော့ သွားအောင် လှည့်ပေး ရမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
From : Duwun by Y
Originally published at - www.duwun.com.mm
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, June 06, 2017 No comments:
ကဏ္ဍ ကျန်းမာရေး, အရေးပေါ်သူနာပြု
အိပ်ဆေးသုံးခြင်းဟာ တစ်နေ့ ဆေးလိပ်တစ်ဗူး သောက်သလို အန္တရာယ်များ ဟုဆို
ကျွမ်းကျင် ပညာရှင် တွေက အိပ်ဆေး အလွန် အကျွံ သုံးစွဲ သူများကို သတိပေး မှုတွေ ပြုလုပ် ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အဆို အရ အိမ်ဆေး သောက်ခြင်းဟာ တစ်နေ့ကို စီးကရက် တစ်ဘူး သောက်လိုက် သလို ဖြစ်စေပြီး၊ အလွန် အန္တရာယ် များကြောင်း သတိပေး ခဲ့ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ ကျန်းမာရေး ပြဿနာ တိုင်းဟာ အိပ်ဆေး သောက်ခြင်းရဲ့ သက်သေ တစ်ခု ဖြစ်ပြီး၊ ကင်ဆာ၊ လေဖြတ်ခြင်း၊ နှလုံးခုန် ရပ်ခြင်းနဲ့ နှလုံးရောဂါ တွေရဲ့ အရင်း အမြစ် ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
Arizona State University မှ ဒေါက်တာ Shawn Youngstedt က အိပ်လို့မရလို့ အိပ်ဆေးသောက်ခြင်းထက်၊ လေ့ကျင့်ခန်း တစ်ခုခု လုပ်ခြင်းက ပိုပြီး ထိရောက်ကြောင်း၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ အားကစားတွေဟာ အိပ်ဆေးနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် အကျိုးကျေးဇူးကို ပေးစွမ်းပြီး၊ စိတ်ဖိအား များ၊ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက အဆိပ် အတောက်များအပြင် ကင်ဆာ၊ နှလုံး၊ သွေးတိုး၊ ဆီးချို စတဲ့ရောဂါတွေကို ကြိုတင်ကာ ကွယ် နိုင်ကြောင်း၊ ဒါ့အပြင် ကောင်းမွန်စွာအိပ်စက်ခြင်းကို အလိုလို ရရှိမှာ ဖြစ်ကြောင်း အကြံပြုထားပါတယ်။
အိပ်ဆေးကို လိုအပ်သည်ဖြစ်စေ မလိုအပ်သည်ဖြစ်စေ မသုံးသင့်ကြောင်း၊ စီးကရက် တစ်လိပ် နှစ်လိပ် သောက်လိုက်တာ ထက်ပင် မကဘဲ၊ တစ်နေ့ကို စီးကရက် တစ်ဘူးသောက် လိုက်ရ သလိုပင် အန္တရာယ် များလွန်းလို့ အခု သိရှိပြီးချိန်မှ စပြီး ရပ်တန်းက ရပ်သင့်ကြောင်း Shawn က ဆိုပါတယ်။
Shawn က CNN သတင်းဌာနဲ့ တွေ့ဆုံစဉ်မှာ ” အိပ်ဆေးဆိုတာက ကျန်းမာရေးကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုက်စေတဲ့အရာဆို တာ သေချာပါတယ် .. ဘယ်လောက် အထိ ဆိုးသလဲ ဆိုရင် တစ်နေ့ကို စီးကရက်တစ်ဘူး သောက်တာနဲ့တောင် တူညီပါတယ် .. “လို့ ပြောခဲ့တာပါ။
နောက် အိပ်စက်တဲ့ ပျော်ဝင်မှုကို တိုးတက် စေလိုပါက အခန်းထဲမှာ မီးခပ်လင်းလင်းလေး ထွန်းထား သင့်ကြောင်း၊ အလင်းရောင် ကွဲပြားမှုဟာ ခန္ဒာကိုယ်ရဲ့ သွေးလည်ပတ် မှုကို ပုံမှန် အတိုင်း တည်ငြိမ် စေပြီး၊ အလွယ် တကူ အိပ်စက်စေနိုင်ကြောင်း၊ အိပ်ကာနီးမှာ အစာများများ စားမထား သင့်ကြောင်း၊ အချိန်မှန် အိပ်၊ အချိန်မှန် အိပ်ယာ ထပါက အိပ်စက်ခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွှတ်စွာ အထာကျ သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အကြံပေး ထားပါတယ်။
From : SHWEMOM by Myo Min Htun
Originally published at - http://www.shwemom.com
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, June 03, 2017 No comments:
တက်တူးအသစ်နဲ့ ရေကူးသူ ဘက်တီးရီးယား ၀င်ပြီး သေဆုံး
အသက် ၃၁ နှစ် အရွယ် အမည် မဖော်ပြသူ အမျိုးသား တစ်ဦးဟာ တက်တူး အသစ် ထိုးထားပြီး မက္ကဆီကို ပင်လယ်ကွေ့ အတွင်း ရေဆင်းကူး ရာက အသား စားတဲ့ ဘက်တီးရီးယားနဲ့ ထိတွေ့ မိပြီး သေဆုံး သွားခဲ့ကြောင်း သိရှိ ရပါတယ်။
အဆိုပါ အမျိုးသားရဲ့ သေဆုံးမှု သတင်းကို ဗြိတိသျှ ဆေးပညာ ဂျာနယ်က ဖော်ပြ ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ရေဆင်း မကူးခင် ငါးရက်က ညာဘက် ခြေသလုံးမှာ တက်တူး အသစ် တစ်ခု ထိုးခဲ့ ပါတယ်။
ရေကူးပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ၄င်း အမျိုးသားဟာ ဖျားနာပြီး သေဆုံး ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးရုံ ပို့ချိန်မှာ တက်တူး ထိုးတားတဲ့ နေရာက ယောင်ယမ်းပြီး အခြေအနေ ဆိုးရွားနေ တာကိုလည်း တွေ့ရှိခဲ့ ရပါတယ်။
ဆေးရုံမှာ အသက်ကယ်ကိရိယာ အကူအညီနဲ့ နှစ်ပတ်ခန့် အသက်ရှင်ခဲ့ပြီးနောက် ကျောက်ကပ်ပျက်စီးပြီး သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
အခုလိုသေဆုံးမှုဟာ ကာယကံရှင်အနေနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ အရက်သောက်သုံးခဲ့တာကြောင့်လည်း ပါကြောင်း ဆရာဝန်တွေက ဆိုပါတယ်။
သေဆုံးသူဟာ ဘယ်နိုင်ငံသား ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သတင်းတွေက မဖော်ပြခဲ့ပါဘူး။ သူကူးစက်ခံခဲ့ရတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုး ကြောင့် အမေရိကန်မှာ နှစ်စဉ်လူ ၈ သောင်းခန့် ဖျားနာပြီး လူ ၁၀၀ ခန့် သေဆုံးနေပါတယ်။
အမေရိကန် ရောဂါတားဆီးထိန်းချုပ် ရေးအဖွဲ့ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ အနာကို ပင်လယ်ရေထိတွေ့မှု၊ မကျက်တဲ့အသား စားသုံးမှုတွေကြောင့် အဲဒီ ရောဂါပိုး ကူးစက် ခံရနိုင်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
From : Myanmar Cable News
Originally published at - http://www.mcntv.biz/news/international-news/37606/
ကဏ္ဍ ကျန်းမာရေး, နိုင်ငံတကာသတင်း
ဆရာ water poisoning ဆိုတာ တကယ်ရှိ ပါသလား။ ရှိခဲ့ရင် ရှင်းပြ ပေးပါခင်ဗျာ။
ရေအဆိပ် သင့်ခြင်းလို့ ခေါင်းစဉ် တပ်ပေမဲ့ သောက်တဲ့ - သုံးတဲ့ ရေထဲမှာ အဆိပ်ပါတာ မဟုတ်ပါ။ ရေသန့်ဗူး ထဲက ရေတွေ တအားကြီး သောက်ရင်လဲ အဆိပ် သင့်နိုင် တာကို ပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးစာနဲ့ ဆို Water intoxication လို့ ခေါ်တယ်။ သေကောင်း သေနိုင်တယ်။ ဦးနှောက်လုပ်ငန်းတွေ ထိခိုက်စေမယ်။ Electrolytes ဓါတ်ဆား အချိုးအစား မမျှရာကနေ Hyponatremia ခေါ်တဲ့ (ဆိုဒီယမ်) နည်းတာ ဖြစ်စေတယ်။
အမှတ်တမဲ့တော့ ရေတွေ တအား သောက်တယ်ဆိုတာ ရှားပါတယ်။ Water drinking contests ရေသောက် ပြိုင်ကြရင် ဖြစ်နိုင်တယ်။ ၁၂-၁-၂ဝဝ၇ တုံးက Hold Your Wee foraWii ရေသောက်ပြီး သေးမပေါက်နဲ့ ဆိုတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်သူ ၂၈ နှစ် အရွယ်၊ ကလေး ၂ ယောက် အမေ Jennifer Strange ဟာ သေသွားလို့ ပြိုင်ပွဲစီစဉ်တဲ့ The End ရေဒီယိုက ဒေါ်လာ ၁၆့၅ သန်း လျှော်လိုက် ရတယ်။
ဆေးရုံတွေမှာ လူနာကို လိုတာထက် ရေပါတဲ့ Drips တွေ အများကြီး သွင်းရင်လဲ ဒုက္ခပေးမယ်။ ရေကောင်း ရေသန့်ကနေ အဆိပ်လို့ ခေါ်တော့မယ်။ တန်ဆေး၊ လွန်ဘေး အစစ်ဖြစ်တယ်။
၂ဝဝ၈ မေ ၁၅ က ဗီယက်နမ် (ထန်ဝှာ) ခရိုင်မှာ အမျိုးသမီး တစ်ယောက် ရေအဆိပ်သင့်လို့ ဆေးရုံ မတင်မှီ ပြုစုပေးနေပုံ
လူ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာ ပါးစပ်နှုတ်ခမ်း ကနေ စအို အထိရှိတဲ့ အစာလမ်း ကနေ ရေကို စုပ်ယူနိုင်စွမ်း ရှိတယ်။ အစာအိမ်နဲ့ အူတွေကနေ အများဆုံး စုပ်ယူပေးတယ်။ ရေ နဲ့ (ဆိုဒီယမ်) ဓါတ်ဆားက တွဲနေတယ်။ တသမတ်ထဲ မျှနေရတယ်။ (ဆဲလ်) တခုရဲ့ အပြင်ဝန်းကျင်နဲ့ (ဆဲလ်) အတွင်ကလဲ မျှနေရတယ်။ ရေက များသွား ချိန်မှာ (ဆိုဒီယမ်) က နည်းသွားမယ်။ Hyponatremia ခေါ်တယ်။ တနေရာရာမှာ ဓါတ်ဆား အချိုး အဆ ကဲမယ် - နည်းမယ်ဆိုရင် (ဆဲလ်) နံရံကနေ Osmosis (အော့စ်မောဆစ်) အပြန်အလှန် စုပ်ယူ - စုပ်ထုတ်ခြင်း ဖြစ်စဉ်အရ ညီစေအာင် ကြိုးစားလိမ့်မယ်။ (ဆဲလ်) တွေ ဖေါင်းကားလာလိမ့်မယ်။ Intracranial pressure ဦးနှောက်ထဲမှာ ဖိအားတွေ တက်လာလိမ့်မယ်။
Water intoxication ရေအဆိပ်သင့်ခြင်း လက္ခဏာတွေ -
• Difficulty breathing during exertion ကြိုးစားမှု ရှိချိန်မှာ အသက်ရှူလို့ ခက်လာမယ်၊
• Muscle weakness ကြွက်သားတွေ အားနည်း လာမယ်၊ Twitching အလိုလို လှုပ်မယ်၊ Cramping နာမယ်၊
• Thirst ရေငတ်လာမယ်၊
• Vital signs အရေးအကြီးဆုံး လက္ခဏာတွေ ထိခိုက်လာမယ်။ ဥပမာ Bradycardia နှလုံးခုန် နှေးမယ်၊ Widened pulse pressure သွေးဖိအား ပြောင်းလာမယ်။ အထက်သွေး ဖိအားနဲ့ အောက်သွေး ဖိအား ကွာဟလာမယ်။
• • Cerebral edema ဦးနှောက်ရောင်လာမယ်။
• Brain stem ဦးနှောက်အခြေနေရာကိုဖိအား သက်ရောက်လို့ ဆက်ဖြစ်စရာတွေ ဖြစ်လာမယ်။
• Central nervous system dysfunction ဗဟိုဦးနှောက်-အာရုံကြောစနစ် ထိခိုက်လာမယ်။
• ကလေး ငယ်လေ ဆိုးလေ။ ၉-၆-၂ဝဝ၂ မှာ ၄ နှစ်သမီးလေး Cassandra Killpack ကို မအေဖြစ်သူက ရေတဂါလံ ကုန်အောင် အသောက် ခိုင်းရာ ကနေ သေသွားလို့ သူ့အမေ Jennette Killpack ထောင်ကျတယ်။
• Marathon runners မာရသွန် အပြေးသမား အဖြစ်များတယ်။ ရေသောက် များရာ ကနေ Sodium levels 135 mmol/L အောက်ကျ လာချိန်မှာ ရောဂါ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်လာမယ်။
• Overexertion ခွန်အား အသုံးများတာ ကနေလဲ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ မောလွန်းလို့ ရေတွေ တအား သောက်ရင် ဖြစ်မယ်။ အဲတာကြောင့် ၁၂-၉-၁၉၉၉ မှာ စစ်သင်တန်း ဆရာ Michael J. Schindler သေဆုံးရတယ်။
• MDMA (Ecstasy) ဆေးမျိုး သောက်ပြီး လုပ်သင့်တာထက် ပိုပြီး ခွန်အားစိုက်ရာ ကနေလည်း ဖြစ်မယ်။
• Heat stress သိပ်ပူချိန်မျိုးမှာ နားနေရင်နဲ့ ရေတွေ အသောက်များ ရင်လဲ ဖြစ်မယ်။
• Psychogenic polydipsia စိတ်ရောဂါ ရှိသူတွေက ရေပို သောက်တယ်။
Mild intoxication တော်တော် တန်တန်က ရောဂါ လက္ခဏာ မပြသေးပါ။ ဖြစ်လာပြီဆိုရင်
From : Dr. တင့်ဆွေ
Originally published at - https://www.facebook.com/drtintswe
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, May 06, 2017 No comments:
ကဏ္ဍ ကျန်းမာရေး, ဗဟုသုတများ
အဲကွန်းကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေ
ပူပြင်းတဲ့ နွေရက် တွေကို အံတုဖို့ အဲကွန်းကို အသုံးပြု လာကြတာ တွေ့ရ ပါတယ်။ အေးစိမ့် နေတဲ့ အဲကွန်း ခန်းထဲမှာ နေထိုင် လုပ်ကိုင် ရတာ သက်သောင့် သက်သာ ရှိပေမယ့် အဲကွန်းကြောင့် သင့်ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လို ထိခိုက်စေ သလဲ ဆိုတာ သုတေသီတွေရဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိ ချက်ကို အခြေခံပြီး ပြောပြပါမယ်။
အပူ အအေး သတိပြု
အဲကွန်းခန်းထဲမှာ အချိန်အကြာကြီး နေနေခဲ့တဲ့ သူဟာ အပြင်ထွက်တဲ့ အခါ ရုတ်တရက် ချက်ချင်း မထွက်ပါနဲ့။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အအေးနဲ့ အကြာကြီး ထိတွေ့ခဲ့တဲ့ သင့် ခန္ဓာကိုယ်က အအေးနဲ့ လိုက်လျော ညီထွေ ဖြစ်အောင် တုံ့ပြန်ပေးနေချိန်မှာ ရုတ်တရက် အပူထဲကို ရောက်သွားတဲ့ တုံ့ပြန်လုပ်ဆောင်မှုတွေ ပျက်ယွင်းပြီး ရှော့ဖြစ်ပြီး လေဖြတ်ခြင်း၊ သွေးလည်ပတ်မှု ပျက်ယွင်းခြင်း အပါအဝင် အသက်သေဆုံးတဲ့ အထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ထို့အတူပါပဲ အပူထဲမှာ အကြာကြီး ရှိနေတဲ့သူဟာ အအေးခန်းထဲကို ရုတ်တရက် မဝင်မိဖို့ ပထမဆုံး သတိပြုပါ။
အေးစိမ့်နေတဲ့ အခန်းထဲမှာ ကြာကြာနေတဲ့ အခါ ခေါင်းကိုက်တာတွေ၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ အဲကွန်းခန်းထဲမှာ နေထိုင် အလုပ် လုပ်ကိုင်တဲ့သူတွေဟာ နာတာရှည် ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာနဲ့ ပန်းလျနွမ်းနယ်တာတွေ ခံစားရနိုင်ပါသတဲ့။ အအေးဒဏ်ကြောင့် နှာခေါင်းနဲ့ ပါးစပ်တွေက ချွဲ သလိပ် နှပ်ရည်တွေ ထွက်လာပြီး အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းကို ပိတ်ဆို့တာတွေ ဖြစ်စေပြီး အသက်ရှူမဝတာမျိုး ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အသက်ရှူမဝတဲ့ အခါ သင့်ခန္ဓာကိုယ် အတွက် အရေးတကြီး လိုအပ်တဲ့ အောက်စီဂျင် မပြည့်မ၀ ဖြစ်လာပြီး ခုခံအား နည်းစေနိုင်ပါတယ်။ အားနည်းလာတဲ့ အခါ တုပ်ကွေးရောဂါ အပါအဝင် အခြား ရောဂါများ ဝင်လာနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ လက်တွေ အစိုဓာတ် ခန်းခြောက် လာမယ်၊ နောက်ပြီး သင့်ရဲ့ နှုတ်ခမ်း လွှာတွေ သွေ့ခြောက်လာလို့ အစိုဓာတ် ရစေဖို့ မကြာခဏ လျှာနဲ့ လျက်နေ ရတယ် ဆိုရင် သတိထားပါ။ သင့်ဝန်းကျင်ကို အေးမြစေတဲ့ အဲကွန်းက ထွက်လာတဲ့ လေအေးတွေက သင့်ရဲ့ အရေပြားကို ခြောက်သွေ့ စေတာပါ။ အရေပြားတွေ ခြောက်သွေ့ လာပြီ ဆိုရင် မကြာခင် ကြမ်းရှလာမှာ ကွဲအက် လာမှာ သေချာပါတယ်။
အဲကွန်းက ဖန်တီးထားတဲ့ အအေးဓာတ်က သွေးပေါင်ကျတာမျိုးတွေ၊ အဆစ်မြစ်ရောင်ရောဂါမျိုးတွေ၊ အာရုံကြောရောင် ရောဂါတွေ ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲကွန်းထဲမှာ အချိန်အများကြီး နေထိုင်မယ် ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ နာဗ်ကြောနှင့် သွေးကြောမျှင်တွေကို အအေးဓာတ်က ကျုံ့စေတာကြောင့် ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြော ဆိုင်ရာ ရောဂါတွေလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ ကားထဲမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ အဲကွန်းက ပေးတဲ့ အအေးဓာတ်က ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့ပြီး မွန်းကြပ်နေတဲ့ မြို့လယ်ကောင် မှာ သင့်အတွက် သက်သောင့် သက်သာ ဖြစ်စေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အဲကွန်းက ခန္ဓာကိုယ် အတွင်း အဏုဇီဝရုပ်ကို ပြောင်းလဲ သွားစေပြီး ကျန်းမာရေး အတွက် ဆိုးကျိုးတွေ ရစေပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ လေထဲက ရောဂါပိုးမွှားတွေ ဥပမာအားဖြင့် ဘက်တီးရီးယား ပိုးမွှားတွေ၊ ကူးစက်လွယ် ရောဂါပိုးတွေက နမိုးနီးလို့ ခေါ်တဲ့ နာတာရှည် အဆုတ်ရောင် ရောဂါ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ညွှန်း – www.onlymyhealth.com
From : ဧရာဝတီ by အေဘယ်လ်
Originally published at - https://burma.irrawaddy.com/lifestyle/2017/05/04/134223.html
မျှဝေသူ ရစ် မောင် မှာ Thursday, May 04, 2017 No comments:
“စားတာ အသား၊ အိပ်တာ အား” လို့ ဆိုရိုး စကား ရှိပေမယ့် လိုတာထက် ပိုအိပ်စက်တာ၊ အချိန် အများကြီး ပိုအိပ်နေ တတ်တာက ရောဂါ ဆိုးကြီး တခု ဖြစ်သလို တခြား ရောဂါတွေ ကိုလည်း ဖြစ်ပွား စေပါတယ်။
လူတဦးနဲ့ တဦး လိုအပ်ချက် မတူညီ တာကြောင့် လူတိုင်း အတွက် အိပ်စက်ချိန် ဘယ်လောက် လိုတယ်ဆိုတာ သတ်မှတ်ပေးဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အကြမ်း ဖျင်းတော့ အရွယ်ရောက်သူ တဦးဟာ ၇ နာရီကနေ ၈ နာရီလောက် အထိ အိပ်စက်ဖို့ သင့်ပါတယ်။
အိပ်ရေးပျက်ရင် အစားပျက်တတ်ပြီး၊ အစားပျက်ရင် အားနည်းလာတတ်ပါတယ်။ အားနည်းရင် ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ရောဂါဘယ ပေါင်းစုံ ဝင်ရောက် လာ နိုင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အိပ်ချိန်များပြားလွန်းတာကလည်း သင့်ကျန်းမာရေး အတွက် ဆိုးကျိုးတွေ ပေးနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က ၉ နာရီထက် ပိုလွန်ပြီး အိပ်စက်ဖို့ တောင်းဆိုလာပြီ၊ အိပ်စက်ချင်နေပြီ ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးမှာ ဆိုးဝါးမှု တခုခု ရှိလာနေပြီ၊ ရောဂါတခုခု ရှိနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် အိပ်စက်လွန်ရောဂါနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿတွေကို ပြောပြပါမယ်။
စိတ်အားငယ်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း ဖြစ်စေသည်
၂၀၁၄ ခုနှစ်က အရွယ်ရောက် အမြွှာတွေနဲ့ စမ်းသပ်သုတေသန ပြုချက်အရ အိပ်စက်ချိန် ရှည်ကြာသူတွေမှာ စိတ်အားငယ်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း ရောဂါလက္ခဏာတွေ ပိုမိုတွေ့ ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ၇ နာရီကနေ ၉ နာရီကြား အိပ်စက်တဲ့ သူတွေက အဲဒီရောဂါလက္ခဏာ ပြတာ ၂၇ ရာခိုင်နှုန်း ရှိပြီး၊ ၉ နာရီထက် ပိုပြီး အိပ်စက်သူတွေကတော့ ၄၉ ရာခိုင်နှုန်း ရှိတာ တွေ့ရ ပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ အမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့ စမ်းသပ် သုတေသနပြု ရာမှာတော့ သာမန် လိုအပ်တဲ့ အိပ်ချိန်ထက် ပိုပြီး အိပ်စက် တတ်သူတွေမှာ ဦးနှောက်ရဲ့ အလုပ် လုပ်ဆောင်မှုကို ဟန့်တားတာမျိုး ဖြစ်စေပါသတဲ့။ ၉ နာရီထက်ကျော်လွန်ပြီး အိပ်စက်သူတွေ အတွက်တော့ အိပ်စက်ခြင်းက သူတို့ရဲ့ ဦးနှောက်ကို ထိခိုက်စေတဲ့ အပြင် ရင့်ရော်စေတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှု ပြဿနာများ ဖြစ်စေသည်
အိပ်စက်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုရီးယား သုတေသနအဖွဲ့ တခုဟာ ကလေးရဖို့ ဆေးကုသမှု ခံယူနေတဲ့ အမျိုးသမီး ၆၅၀ ဦး ကို စမ်းသပ်လေ့လာခဲ့ရာမှာတော့ အိပ်စက်လွန်သူများမှာ မျိုးပွားမှုနှင့် သန္ဓေအောင်မြင်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ ပိုမို တွေ့ရတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ တနေ့ကို ၇ နာရီကနေ ၈ နာ အတွင်း အိပ်စက်သူတွေက ၉ နာရီကနေ ၁၁ နာရီ အထိ အိပ်စက်သူတွေထက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှု ပြဿနာ ဖြစ်ပွားမှု နည်းပါးပါတယ်။
ကနေဒါ နိုင်ငံ ကွီဘက်မြို့က သုတေသန ပညာရှင်တွေရဲ့ လေ့လာမှုမှာတော့ တနေ့ကို ၈ နာရီထက် ပိုပြီး အိပ်စက်သူတွေဟာ ဆီးချို ရောဂါ ဖြစ်ပွားဖို့ ပုံမှန်ထက် ၂ ဆပို ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိပါတယ်။ တရက်မှာ ၇ နာရီနဲ့ ၈ နာရီကြား အိပ်စက်သူတွေမှာတော့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာနည်းပါးပြီး ခန္ဓာကိုယ်တွင်း လုပ်ငန်းများကို ထိန်းညှိပေးပါသတဲ့။
၂၀၁၂ ခုနှစ်က ပြုလုပ်တဲ့ အမေရိကန် နှလုံးအထူးကုပညာရှင်များရဲ့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ တင်ပြတဲ့ သုတေသန စာတမ်းမှာတော့ တရက်ကို ၈ နာရီနဲ့ အထက် အိပ်စက်သူတွေမှာ နှလုံးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး ပြဿနာများ ဖြစ်ပွားစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လူပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော်ကို စမ်းသပ်သုတေသနပြုထားတဲ့ ဒီ သုတေသနစာတမ်းမှာ ဆက်လက်ဖော်ပြထားတာက အိပ်စက် လွန်သူတွေမှာ အိုမင်းရင့်ရော်မှု ၂ ဆ ဖြစ်ပွားစေပြီး၊ သွေးလွှတ်ကြောဆိုင်ရာ ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု ၁ ဒသမ ၁ ဆ ပိုမို ဖြစ်ပွား စေနိုင်တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ ။
Originally published at - https://burma.irrawaddy.com/lifestyle/2017/05/02/134106.html
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, May 02, 2017 No comments:
အစားသောက် အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး ဟန်ချက်ညီ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ
နေပြည်တော် ဧပြီ ၆
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီး ဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မြင့်ထွေးအား ဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငံ ဂျီနီဗာမြို့အခြေစိုက် Global Commission on Drug Policy (GCDP) ဥက္ကဌ ဖြစ်သူ ဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငံ သမ္မတဟောင်း Ms. Ruth Dreifuss က ယနေ့ နံနက် ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီး ဌာန ဧည့် ခန်းမတွင် လာရောက် တွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် မူးယစ် ဆေးစွဲ ကာကွယ် ကုသရေး မူဝါဒကို ပြည်သူ့ကျန်းမာ ရေး အမြင်ဖြင့် ရေးဆွဲရေး၊ မူးယစ်ဆေးဝါး အန္တရာယ် ကာကွယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်သူ လူထုမှ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးနိုင်သည့်မူဝါဒချမှတ်ရေး၊ မူးယစ်ဆေးစွဲသူများအား ကုသရေး နှင့်ပတ်သက်၍ ကုသမှုအစုံပါဝင်သည့်မူဝါဒချမှတ်ရေး၊ ပြည်သူလူထုသို့ အသိပညာပေး လုပ်ငန်းများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ Global Commission on Drug Policy (GCDP) မှ ထုတ်ဝေသော A New Approach to Decriminalization 2016 Report ကို အသုံးပြုကာ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ကိုက်ညီမည့်မူဝါဒချမှတ်နိုင်ရေးနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးကြသည်။
ယင်းနောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် Lake Garden Hotel ၌ ကျင်းပသော အစားအသောက်ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးလုပ်ငန်းများ ဟန်ချက်ညီ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်အမှာစကား ပြောကြားသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက အစားအသောက်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရေးဆိုရာတွင် စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူ၊ ထုတ်လုပ်သည်မှ အစပြုကာ သုံးစွဲစားသောက်သည်အထိ အဆင့် တိုင်းတွင် အရေးကြီးပါကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာအဆင့်တိုင်းတွင် အန္တရာယ် ကင်းရှင်း ရေးဆိုင်ရာ စံနှုန်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်မှသာ စားသုံးသူများ အနေဖြင့် အန္တရာယ်ကင်းသည့် အစား အသောက်ကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊
ဈေးကွက်တွင် ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေသော စားသောက်ကုန်များအနက် အန္တရာယ်ရှိ သော စားသောက်ကုန်များအား ပြည်သူလူထုမှ စားသုံးရန်မသင့်ဟု သိရှိသည့်အခါ ဝယ်ယူ စားသုံးခြင်းမပြုတော့လျှင် အဆိုပါ အန္တရာယ်ရှိ စားသောက် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုများ ရပ်ဆိုင်းသွားနိုင်ပါကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ရာ ပြည်သူများသည် အစားအသောက်ဘေး အန္တရာယ် ကင်းရှင်း ရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍ (Gate Keeper) အနေဖြင့် ပါဝင်နေသည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊
ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် မည်သည့်အစားအသောက်က စားသင့်သည်၊ မစားသင့်သည်ကို သိရှိစေရန် အလွန်ရေးကြီး ပါကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ပါ၍ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် အစားအသောက်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများကို မြို့ပေါ်သာမက ကျေးလက်ဒေသထိရောက်အောင် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါကြောင်း၊
ပြည်သူလူထုသို့ အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးအသိပညာ မြှင့်တင်ရေးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါ ကြောင်းပြောကြားသည်။
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ဌာနအကြီးအကဲများ၊ နှီးနွယ်ဝန်ကြီးဌာများမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများက အစား အသောက် ဘေးအန္တရယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
From : ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီး ဋ္ဌာန by moi
Originally published at - http://moigovnews.blogspot.com/2017/04/blog-post_78.html
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, April 07, 2017 No comments:
စားသောက်ကုန်များ၌ ပါဝင်သည့် အချက်များ မဖော်ပြပါက အရေးယူမည်
ပြည်တွင်း၌ အစား အသောက် ထုတ်လုပ် သူများသည် ထုတ်လုပ်သည့် ကုန်ပစ္စည်း၏ အမှတ် တံဆိပ် ဖော်ပြ ချက်တွင် ပါဝင်သော အချက် အလက် များကို သုံးလ အတွင်း ထည့်သွင်း ဖော်ပြ ရမည် ဖြစ်ပြီး လိုက်နာမှု မရှိပါက ဥပဒေ အတိုင်း အရေး ယူမည် ဖြစ်ကြောင်း အစား အသောက်နှင့် ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေး ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ် ဒေါက်တာ သန်းထွဋ်က ပြောကြားသည်။
“ဈေးကွက်မှာ သတ်မှတ်ချက်နဲ့ မကိုက်ညီတာ ရှိပါတယ်။ အစားအသောက်တွေဟာ သတ်မှတ်တဲ့ အမှတ်တံဆိပ် ဖော်ပြချက်ကို လိုက်နာရမယ်”ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
အမှတ်တံဆိပ် ဖော်ပြချက်တွင် လုပ်ငန်း တည်နေရာလိပ်စာ၊ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်၊ ထုတ်လုပ်ရက်စွဲ၊ သက်တမ်းကုန်ရက်စွဲ၊ ထုတ်လုပ် အပတ်စဉ် အမှတ်၊ FDA ၏ အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်း ထောက်ခံချက် အမှတ်နှင့် လိုင်စင်အမှတ်များ ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်ကြောင်း FDA ၏ ဖော်ပြချက်များအရ သိရသည်။
အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး ဦးစီးဌာနအနေနှင့် ရန်ကုန်နှင့် နေပြည်တော်တွင် ဈေးကွက်များရှိ အစားအသောက် နမူနာများကို ကောက်ယူ၍ လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ထောက်ခံချက်အမှတ် ဖော်ပြသူများ ရှိသကဲ့သို့ ပြုလုပ်ဆဲနှင့် လုံးဝ လုပ်ဆောင်ခြင်း မရှိသူများကိုလည်း တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ယင်းဌာန၏ စစ်ဆေးမှုများအရ သိရသည်။
“တချို့ကတော့ ရထားတဲ့ ထောက်ခံချက်အမှတ် ဖော်ပြတယ်။ တချို့ကတော့ လျှောက်ပါမယ်ပေါ့။ လျှောက်နေတဲ့ကာလမှာလည်း လျှောက်ထားဆဲနဲ့ ဆက်ထုတ် လုပ်ခွင့်ပေးမှာပါ။ အဲ့လို အခြေအနေမှာ ဈေးကွက် ထောက်လှမ်းကြည့်သွားမှာပါ”ဟု ဒေါက်တာ သန်းထွဋ်က ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ အမှတ်တံဆိပ် ဖော်ပြချက်ပါ အချက်များကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လ အကုန်တွင် နောက်ဆုံးထား ထည့်သွင်း ဖော်ပြရန် ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက်နေ့တွင် အသိပေး ကြေညာချက်ထုတ် ပြန်ခဲ့သော်လည်း အစားအသောက် ထုတ်လုပ်သူများ၏ အခက်အခဲများကြောင့် ယခုကဲ့သို့ အချိန်ကာလတစ်ခု သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းကာလအပြီး လိုက်နာ ဆောင်ရွက်မှု မရှိသူများကို အမျိုးသားအစား အသောက်ဥပဒေ၊ စားသုံးသူကာကွယ်ရေး ဥပဒေများဖြင့် အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောဆိုသည်။
From : The Vice Myanmar
Originally published at - http://thevoicemyanmar.com/news/7464-stk
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, April 02, 2017 No comments:
ဘရာဇီးမှ အသားတင်သွင်းမှု တရုတ်နှင့် အီးယူ ရပ်ဆိုင်း
ဘရာဇီး နိုင်ငံက ထုတ်လုပ်တဲ့ အသားတွေကို အဓိက တင်သွင်းနေတဲ့ တရုတ် နိုင်ငံနဲ့ အီးယူ တို့က အသားတွေ ကျန်းမာရေး အတွက် စိတ်မချရ ဘူးဆိုပြီး တင်သွင်းမှု တွေကို ရပ်ဆိုင်း လိုက်ပါတယ်။
မလတ်ဆတ်တဲ့၊ အစာ အဆိပ် သင့်နိုင်တဲ့ အသားတွေကို ထုပ်ပိုး တင်ပို့တာ၊ ကြီးကြပ်သူ စစ်ဆေးရေး အရာရှိတွေကို လာဘ်ထိုး တာတွေ စစ်ဆေး တွေ့ရှိခဲ့ အပြီး တရုတ်နဲ့ အီးယူက ဘရာဇီး နိုင်ငံထွက် အသားတွေကို ပိတ်ပင် လိုက်တာပါ။
ဘရာဇီး ရဲတပ်ဖွဲ့က မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့မှာ ပြည်နယ် ၆ ပြည်နယ် အတွင်း အသား ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီတွေကို အကြီး အကျယ် ဝင်ရောက် စီးနင်းပြီး စုံစမ်း စစ်ဆေး မှုတွေ ဆောင်ရွက်နေ ရပါတယ်။
အခုလို မလတ်ဆတ်တဲ့အသားတွေကို ပြည်ပနိုင်ငံတွေကို နှစ်တွေနဲ့ချီ တင်ပို့ခဲ့ကြတဲ့ အထောက်အထားတွေကိုလည်း အာဏာပိုင်တွေ ရရှိထားကြပါတယ်။
ဘရာဇီးနိုင်ငံဟာ အသားတင်ပို့မှုကနေ တနှစ်တနှစ်ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂ ဘီလီယံ ဝင်ငွေရရှိနေတဲ့အတွက် ဒီကဏ္ဍဟာ ဘရာဇီးနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးအတွက် အဓိကကျတဲ့ စီးပွားရေးကဏ္ဍတခု ဖြစ်ပါတယ်။
ဘရာဇီးသမ္မတဟာလည်း ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ရုံးပိတ်ရက်တွေအတွင်း အရေးပေါ် အစည်းအဝေးတွေ ကျင်းပခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြားသံတမန်တွေကို အသားကင်ဆိုင်ခေါ်ပြီး ဘရာဇီးနိုင်ငံထွက် အသားတွေရဲ့ အရည်အသွေးကို အာမခံ စားပြခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၁၇ ရက် မနက်ပိုင်းက နေရာပေါင်း ၂၀၀ နီးပါးမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၀၀၀ ကျော်နဲ့ အရေးပေါ်စီးနင်းမှုတွေ လုပ်ခဲ့တာမှာ ကုမ္ပဏီတွေက အစိုးရလိုင်စင်ရရှိဖို့အရေး ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေ၊ အာဏာရပါတီ အမတ်တွေကို လက်သိပ်ထိုး လာဘ်ထိုးမှုတွေ ရှိခဲ့တာတွေကိုလည်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အရာရှိတွေက တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အသားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ ၃၀ ကျော်ကို ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ အသားတွေ တင်ပို့မှုနဲ့ စွပ်စွဲခံရပြီး အဲ့ဒီထဲမှာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး အမဲသားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ JBS ကုမ္ပဏီနဲ့ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ကြက်သား၊ ဘဲသား ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ BRF ကုမ္ပဏီတို့လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/196610
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, March 22, 2017 No comments:
အွန်လိုင်းမှာ ရောင်းချတဲ့ အဆီကျဆေးတချို့ ထိရောက်မှု မရှိ
ရန်ကုန်၊ မတ် ၁၅ – အွန်လိုင်းမှာ ရောင်းချတဲ့ အဆီချဆေး တွေက ထိရောက်မှု မရှိ တာတွေ များနေတယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
အွန်လိုင်းက အဆီ ချဆေး ကောင်းတယ် ဆိုပြီး ဝယ်လိုက်တာ တကယ် သောက်ကြည့် လိုက်တော့ အဆင် မပြေဘူး၊ သောက်တာ လေးငါးဘူး ရှိနေပြီ၊ တကယ် ထိရောက်မှု မရှိဘူး ဆိုတော့ ဖြတ်လိုက်တာ၊ ရောင်းတာတွေ ကလဲ အများကြီး ရှိတယ်၊ ရောင်းတဲ့ သူတွေ ကတော့ တကယ် ထိရောက်တယ် ဆိုပြီး တင် ပြီးရောင်း ကြတယ်၊ ရောင်း သူကတော့ ရောင်းထွက်အောင် လုပ်မှာပဲ၊ ဝယ်တဲ့ သူတွေ ကသာ ရွေးပြီး ဝယ်သင့် တယ်လို့ အွန်လိုင်းက ဝယ်ယူသူ ကိုပြည့်ဖြိုးက ပြောပါတယ်။
အွန်လိုင်းမှာရောင်းချနေတဲ့ အဆီချဆေးတွေက ရှောက်သီးနဲ့ ထုတ်လုပ်တာတွေကို အများဆုံး ရောင်းချ နေတာဖြစ်ပြီး ကိုယ်တိုင် ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတာဖြစ်ပြီး တချို့တွေကတော့ တစ်ဆင့်ပြန်လည် ရောင်းချနေတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အစ်မတို့က တစ်ဆင့်ပြန်ရောင်းတာဆိုတော့ အခက် အခဲဖြစ်တယ်၊ ထိရောက်မှု မရှိတာတွေ ဆိုပြီး ပြန်ပြောတာတွေ ရှိတယ်၊ အစ်မတို့ကလဲ တစ်ဆင့်ပြန်ယူရတာဆိုတော့ မကောင်း ဘူးဆိုရင်တော့ ကိုယ်ပဲ အပြောခံ ရတာလေ၊ အဲဒီလိုဆိုတော့ မကောင်းနိုင်ဘူးလို့ အွန်လိုင်းကနေ ဈေးရောင်း တာတွေကို ပြုလုပ်နေသူ မသင်ဇာက ပြောပါတယ်။
အွန်လိုင်းမှာအဆီချဆေးတွေကို တံဆိပ်လေးငါးမျိုးနဲ့ ရောင်းချနေတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါ တယ်။ သည်လို တံဆိပ်တွေ အများကြီးမှာမှ တကယ် ထိရောက်တဲ့ အဆီချဆေးတွေ နည်းပါးနေတာ ဖြစ်ပြီး မထိရောက် တာတွေက သာအများ အပြားရှိနေ တာဖြစ်ပါတယ်။
From : ကုမုဒြာဂျာနယ် by လိမ္မာ
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, March 18, 2017 No comments:
ဈေးကွက်တွင်ရောင်းမည့်အသားများ၏ အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှု အမေရိကန်ပညာရှင်များ ကူညီမည်
ဈေးကွက် ထဲမှာ ရောင်းချမယ့် တိရစ္ဆာန် အသားတွေရဲ့ အရည် အသွေးကို စစ်ဆေးရာမှာ ပိုမို တိကျတဲ့ အဖြေတွေ ရရှိစေဖို့ အမေရိကန် ပညာရှင်တွေက နည်းပညာ သင်တန်းတွေ ပို့ချပေး သွားမယ်လို့ မြန်မာ့ လယ်ယာနဲ့ မွေးမြူရေး ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် အကူအညီ ပေးနေတဲ့ Winrock International က ပြောပါတယ်။
သားသတ်ရုံတွေက အသားတွေကို စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ရတဲ့ ဆရာဝန်တွေ အပါအဝင် အစားအသောက်ထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပါ သင်ကြားပေးသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ Winrock International က ဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံ ဒေါက်တာသက်ခိုင်က ပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီသင်တန်းကို အခု မတ်လ ၁၆ ရက်ကနေ ၁၈ ရက်အထိ မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှာ ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်တွေ၊ အသားထုတ်လုပ်သူတွေနဲ့ အစားအသောက် ဘေးကင်းလုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်နေသူတွေ တက်ရောက်သင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/195134
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, March 15, 2017 No comments:
ဆီးချိုရောဂါ စီမံကိန်းအတွက် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံက ဒေါ်လာ ၁ သန်းကျော် ကူညီမည်
မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ဆောင်ရွက်မယ့် ဆီးချို ရောဂါ စီမံကိန်း အတွက် ဒိန်းမတ် နိုင်ငံက ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၂ သန်း ကူညီ သွားဖို့ သဘော တူညီ လိုက်ပါတယ်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အထိ ရေးဆွဲ ထားတဲ့ ဆီးချိုရောဂါ စီမံကိန်း အတွက် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံက ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၂ သန်း ကူညီဖို့ မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့က ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစား ဝန်ကြီး ဌာနတို့ နားလည်မှု စာချွန်လွှာ ရေးထိုး ခဲ့ပါတယ်။
ဒီစီမံကိန်းမှာ Type 1 လို့ခေါ်တဲ့ ကလေးဘဝမှာဖြစ်တဲ့ ဆီးချိုလူနာတွေအတွက် အင်ဆူလင်ဆေး လက်လှမ်းမှီအောင် ဆောင်ရွက် သွားမှာဖြစ် ပါတယ်လို့ နိုဗိုနော်ဒစ် ကုမ္ပဏီမှ ဟန်နာရစ်ခ်က ပြောပါတယ်။
“ဆီးချိုရှိတဲ့ကလေးတွေကို တိုးတက်အောင် ပြောင်းလဲပေးနေပါပြီ။ အထူးကောင်းမွန်တဲ့ ဆီးချိုရောဂါကုသရေး အစီအစဉ်တွေက ဆီးချိုရောဂါရှိတဲ့ ကလေးအရေ အတွက်ကို လျှော့ချပေးနေပါတယ်။
ကလေးတွေမှာရှိတဲ့ ဆီးချိုရောဂါကို သက်သာကောင်းမွန်စေတဲ့ အစီအစဉ်က ကျနော်တို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ Type-1 ဆီးချိုအမျိုးအစားရှိတဲ့ ကလေးတွေအတွက် မြန်မာပြည်အနှံ့အပြားမှာ ဆေးခန်းတွေ အများအပြား ဖွင့်ပေးမှာဖြစ်ပြီး ဆေးခန်းတိုင်းမှာ ကုသနိုင်ပါတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီပွဲကို တက်ရောက်လာတဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကတော့ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ဆီးချိုဖြစ်ပွားသူ အရေအတွက်ဟာ အရမ်းများနေတဲ့အတွက် သကြားဓာတ်ပါဝင်မှုနှုန်း များတဲ့ အစားအသောက်တွေကို အခွန်တိုးမြှင့်ကောက်သင့်တယ်လို့ မှတ်ချက်ပေး ပြောပါတယ်။
ဆီးချိုရောဂါဟာ ပျောက်ကင်းအောင်ကုသလို့ရတဲ့ရောဂါ မဟုက်သလို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားသူဦးရေဟာလည်း လူဦးရေရဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဆီးချိုရောဂါကို ဆရာဝန်တွေကပဲ ကုသပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနတွေမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေကို
စောစောသိနိုင်ဖို့နဲ့ ရေရှည်ကုသစောင့်ရှောက်မှု ပေးနိုင်အောင် သင်ကြားပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
“၁၀ မြို့နယ်ကို ကျနော်တို့ စဝင်တယ်။ ဒီလကုန်မှာ နောက်ထပ် ၁၀ မြို့နယ်ကို စပါမယ်။ စီမံကိန်းဝန်ကြီးရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်အရ တနှစ်မှာ ၆၀ သို့မဟုတ် ၇၀ လောက် ရအောင် ကျနော်တို့ ဖြန့်ပါမယ်။ အဲဒီတော့ ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုရင် ရွာတရွာမှာ ဆီးချိုးသွေးချိုရောဂါအတွက် သူနာပြုဆရာမတယောက်က သွားမယ်။
သူက ရွာမှာ ကြေညာမယ်။ အသက် ၄၀ ကျော်တဲ့လူ၊ ဝတဲ့လူ၊ မျိုးရိုးရှိတဲ့လူ၊ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့လူ အကုန်လုံး ရောဂါစစ်ခွင့်ရှိတယ်။ တွေ့ရင် ကုပေးမယ်။ လိုရင် လွှဲပေးမယ်။ အဲဒါကို ကျနော်တို့ လုပ်မှာပါ” လို့ ဆီးချိုရောဂါ စီမံကိန်းမန်နေဂျာ ဒေါက်တာကိုကိုက ပြောပါတယ်။
ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်ပွားနေသူ ၁၀ ယောက်ထဲက ၇ ယောက်ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ရောဂါဖြစ်ပွားနေမှန်း မသိကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီရက်ပိုင်းမှာပဲ ဝန်ကြီးဌာနက ရွေးချယ် ထားတဲ့ ကျေးလက်တွေမှာ ဆီးချိုတိုင်းကိရိယာနဲ့ ဆီးချိုလူနာတွေကို လိုက်လံရှာဖွေသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆီးချိုဝေဒနာ ခံစားနေရတဲ့ လူနာတွေအတွက်ကိုတော့ ရေရှည်ကုသနိုင်ဖို့အတွက် လူတိုင်း လက်လှမ်းမီတဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု စနစ်ထဲမှာ ပါဝင်အောင် ဝန်ကြီးဌာနက ရေးဆွဲနေပါတယ်။
From : ဒီဗွီဘီ By စည်သူဇေယျ
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/195068
ဆေးလိပ်သောက်ခွင့်အသက် ၂၁ နှစ်အဖြစ် စင်ကာပူ တိုးမြှင့် သတ်မှတ်မယ်
စင်ကာပူ နိုင်ငံမှာ ဆေးလိပ် သောက်ခွင့်ရှိတဲ့ အသက် အရွယ် သတ်မှတ် ချက်ကို ၁၈ နှစ်ကနေ ၂၁ နှစ်ထိ တိုးမြှင့်မယ်လို့ စင်ကာပူ ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာန မတ်လ ၉ ရက်နေ့က ပြောဆို လိုက်ပါတယ်။
ဆေးလိပ် သောက်ခွင့် အတွက် အသက် အရွယ် သတ်မှတ်ချက်ကို လွှတ်တော်ထဲမှာ တစ်နှစ် အတွင်း ဆွေးနွေး သွားမှာ ဖြစ်ပြီး နှစ်အနည်းငယ် အတွင်း ဥပဒေ အနေနဲ့ ပြဌာန်းနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ စင်ကာပူ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ အကြီးတန်းအရာရှိဖြစ်သူ အေမီခေါ်က ဆိုပါတယ်။
ချွင်းချက်အနေနဲ့ ဥပဒေ မပြဌာန်းမီမှာ အသက် ၁၈ နှစ်နဲ့ အထက် ဆေးလိပ်သောက်နေသူတွေ အနေနဲ့ကတော လောလောဆယ် လွတ်ကင်းခွင့်ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စင်ကာပူ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ လူငယ်အများစုဟာ အသက် ၂၁ နှစ်မပြည့်သေးခင်မှာပဲ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ အကျင့်ကို ရရှိကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဆေးလိပ်သောက်ခွင့်ရှိတဲ့ ဥပဒေကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်ကတည်းက ပြဌာန်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
စင်ကာပူအစိုးရဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ပန်းခြံနဲ့ အပန်းဖြေနေရာပေါင်း ၄၀၀ ကျော်ကို ဆေးလိပ်ကင်းမဲ့ဇုန် အနေနဲ့ သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ စင်ကာပူမှာ နေရာပေါင်း ၃၂၀၀၀ ကျော်ကို ဆေးလိပ်ကင်းမဲ့ဇုန်အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Originally published at - http://www.mcntv.biz/news/international-news/31411/
ရေဆိုးထုတ် စက်ရုံတွေ သတ်မှတ် အချိန်တွင်း ရေဆိုးစွန့်ထုတ်မှု မရှိရင် အရေးယူမည်
မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ စက်မှုဇုန် အတွင်းက ရေဆိုးထုတ် စက်ရုံတွေဟာ သတ်မှတ် ထားတဲ့ အချိန် အတိုင်း ရေဆိုး စွန့်ထုတ် တာတွေ မလုပ်ဆောင်တဲ့ အတွက် အရေးယူ သွားမယ်လို့ မန္တလေး မြို့တော် စည်ပင် သာယာရေး ကော်မတီ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
ညနေ ၆ နာရီကနေ မနက် ၅ နာရီကြားကို ရေဆိုးစွန့်ပစ်ချိန်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် စည်းကမ်းလိုက်နာမှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးသွားမယ်လို့ မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ရေနဲ့ သန့်ရှင်းမှုဌာန ကော်မတီဝင် ဒေါ်မြင့်မြင့်သန်း က ပြောပါတယ်။
"ရေဆိုးစွန့်ထုတ်တဲ့အချိန်ကို သွားစစ်မှာ၊ အစ်မတို့က ညနေ ၆ နာရီကနေ မနက် ၅ နာရီအတွင်းလို့ သတ်မှတ်ထားတာလေ၊ ဒါပေမဲ့ စက်ရုံတွေကကျတော့ သူတို့ ကြိုက်တဲ့အချိန် သူတို့ စွန့်ပစ်ကြတာလေ၊ ဘယ်အချိန်တွေမှာ သူတို့ စွန့်ပစ်လဲဆိုတာကို သွားစစ်မှာ"
စက်ရုံတွေကို တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပြီး စည်းကမ်းမလိုက်နာဘူးဆိုရင် အရေးယူသွားမှာ ဖြစ်တယ် လို့လည်း ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရေဆိုးတွေကို သန့်စင်ပြီးမှ စွန့်ပစ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ရေဆိုးသန့်စင်ဖို့ ရေစစ်ကန်တွေ ရှိ/ မရှိ ကိုလည်း စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
မန္တလေးစက်မှုဇုန်အတွင်းက အမရပူရနဲ့ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်တွေမှာ စက်ရုံပေါင်း ၆၀ ကျော်ရှိပြီး အဲဒီထဲက ၁၃ ရုံလောက်သာ ရေစစ်ကန်တွေထားရှိကြောင်း သိရှိထား တယ်လို့ မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော် မတီ ရေနဲ့ သန့်ရှင်းမှုဌာနက ပြောပါတယ်။
စက်ရုံတွေကို သွားရောက်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာက ရေနဲ့ သန့်ရှင်းရေးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဌာန၊ စက်မှုကြီးကြပ် စစ်ဆးရေး ဦးစီးဌာန၊ အလုပ်ရုံနဲ့ အလုပ်သမားဥပဒေ စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန၊ စက်မှုဇုန်ကြီးကြပ်ရေးကောက်မတီနဲ့ ရပ်ကွက်နဲ့ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေ ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, March 05, 2017 No comments:
လူမှုဖူလုံရေး-ကဲဝဲလ်ဆေးခန်း အသစ်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ
ရန်ကုန် မတ် ၄
အလုပ် သမား၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အား ဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှု ဖူလုံရေး အဖွဲ့၏ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး မင်္ဂလာဒုံ မြို့နယ်ရှိ လူမှု ဖူလုံရေး-ကဲဝဲလ် ဆေး ခန်း၊ ဆေးခန်း အသစ်ဖွင့်ပွဲ အခမ်း အနားကို ယနေ့ နံနက် (၉) နာရီတွင် အဆိုပါ ဆေးခန်း၌ ကျင်းပခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးနှင့် တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များမှ လူမှု ဖူလုံရေး-ကဲဝဲလ် ဆေးခန်း အသစ်ကို ဖဲကြိုးဖြတ် ဖွင့်လှစ် ပေးသည်။
အခမ်းအနား၌ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးက အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အား ဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှု ဖူလုံရေး အဖွဲ့အနေဖြင့် လူမှုဖူလုံရေး အဖွဲ့၏ ဆောင် ပုဒ် ဖြစ်သည့် “စုပေါင်း ခြင်းဖြင့် ဖူလုံအံ့” ဆိုသည့် ဆောင်ပုဒ်နှင့် အညီ အလုပ်ရှင် ထည့်ဝင်ကြေး၊ အလုပ်သမား ထည့်ဝင်ကြေးနှင့် နိုင်ငံတော်၏ ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် စုပေါင်း ထားသည့် ရန်ပုံငွေ များဖြင့် အာမခံထားသူ အလုပ်သမားများ လူမှုဒုက္ခနှင့် ရင်ဆိုင်ရချိန်၊ မကျန်းမာမှု ဖြစ်ချိန်၊ ဝင်ငွေလျော့နည်း ရပ်စဲ သွားသည့်အခါများတွင် လိုအပ်သော ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုနှင့် ငွေကြေးအကျိုးခံစားခွင့်များကို ထိရောက် အကျိုးရှိစွာ ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိပါကြောင်း။
ထို့အတူ လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့လျှင်လည်း ဆေးကုသမှုပေးခြင်း၊ ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခြင်းတို့ အပြင် ကိုယ်လက်အင်္ဂါဆုံးရှုံးသွားပါကလည်း ခြေတု၊ လက်တု အစားထိုး တပ်ဆင်ပေးခြင်း၊ လုပ်အားဆုံးရှုံးမှု ရာခိုင်နှုန်းအလိုက် ငွေလုံးငွေရင်းထောက်ပံ့ပေးခြင်းတို့ကို အခြေခံအားဖြင့် လူမှုဖူလုံရေး အာမခံစနစ် များအရ ဆောင် ရွက်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်း။
လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့အနေဖြင့်လက်ရှိ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ အကျုံးဝင် အလုပ်ဌာနပေါင်း ၂၇,၄၃၈ ဌာနရှိပြီး အာမခံ အလုပ်သမားပေါင်း ၉၇၉,၇၄၉ ဦးကိုအကျုံးဝင် မှတ်ပုံတင်နိုင်ခဲ့ပြီး အာမခံအလုပ်သမားတွေအတွက် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ငွေကြေးအကျိုးခံစား ခွင့်များ ထောက်ပံ့ပေးရန် လူမှုဖူလုံရေးစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသော မြို့နယ်ပေါင်း (၁၁၀) မှာ ရုံးခွဲပေါင်း (၇၇) ရုံး၊ ဆေးခန်းပေါင်း (၉၆) ခန်း၊ ဌာနကြီးဆေးခန်း (၅၀)ခန်းနှင့် တိုင်းရင်းဆေးကုခန်း (၁)ခန်း၊ အလုပ်သမား ဆေးရုံကြီး(၃)ရုံ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပြီး ‌ရွေ့လျားဆေးကုသယာဉ် ၂ စီး ဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်မပျက် ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းတွေကို အရှိန်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်း။
လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် လွန်ခဲ့သော နှစ်နှစ်ခန့်က လူမှုဖူလုံရေး-ကဲဝဲလ်ဆေးခန်းကို ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့သည့်အတွက် အာမခံအလုပ်သမား ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်သော မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်တွင် Care Well Medical Co.,Ltd နှင့် ပူးပေါင်း၍ လူမှုဖူလုံရေး-ကဲဝဲလ် ဆေးခန်းသစ်အား ယနေ့ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း။ ယနေ့ဖွင့်လှစ်တဲ့ မင်္ဂလာဒုံ လူမှုဖူလုံရေး-ကဲဝဲလ်ဆေးခန်းအပြင် အာမခံ အလုပ်သမားများရဲ့ လူမှုအကျိုးစီးပွား ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေဖို့အတွက် လိုအပ်သည့်နေရာ၊ မြို့နယ်များတွင် စာချုပ်ဆေးခန်း တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးစီစဉ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အပြင် အလုပ် သမားများ လုပ်ငန်းခွင်မပျက် ဆေးကုသမှု ပေးနိုင်ရေး ရွေ့လျားဆေးကုသယာဉ် (Mobile Medical Unit)ဖြင့် ဆေးကုသ ခြင်း အစီအစဉ်ကို ထပ်မံတိုးချဲ့ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ကိုလည်းအသိပေးတင်ပြ လိုပါကြောင်း။
တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်အလိုက် အကျုံးဝင်အလုပ်ဌာနများမှ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားများ အနေဖြင့်လည်း မိမိတို့ အလုပ်ဌာနများက အလုပ်သမားများကို လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ပြီး ထည့်ဝင် ကြေးများပေးသွင်း၍ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းပြောကြားလိုပါကြောင်း။ သို့မှသာ အလုပ်သမားများအနေဖြင့် လူမှု ဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ ထောက်ပံ့သည့် ထိရောက်ပြည့်စုံသော အကျိုးခံစားခွင့်များကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့နောက် Care Well Medical Co.,Ltd ၏အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာမူယာညွန့်မှ လူမှုဖူလုံရေး-ကဲဝဲလ်ဆေးခန်း အသစ် ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများ အားရှင်းလင်းတင်ပြပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ဧည့်သည်တော်များသည် လူမှုဖူလုံရေး-ကဲဝဲလ် ဆေးခန်းအသစ်အား လှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Originally published at - http://moigovnews.blogspot.com/2017/03/blog-post_57.html
အင်းတော် မြို့မဈေး၌ စားသုံးရန် မသင့်သည့် အစားသောက်များ ရောင်းချနေမှု ရှိ/ မရှိ စစ်ဆေး
အင်းတော် မတ်လ ၃ ရက်
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင်၊ အင်းတော်မြို့၊ မြို့မဈေး အတွင်း ပြည်သူများ စားသုံးရန် မသင့်သည့် အစား အသောက်များ ရောင်းချနေမှု ရှိ-မရှိ စစ်ဆေးခြင်းကို မြို့နယ် စားသုံးသူ ရေးရာ ဦးစီးဌာနနှင့် မြို့နယ် ဌာန ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ သူများ ပူးပေါင်း၍ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ် ၃ ရက် နံနက် ၈ နာရီက ဒုတိယ အကြိမ် ကွင်းဆင်း စစ်ဆေး ခဲ့သည်။
'' ဈေးသည်များအနေဖြင့် မိမိရောင်းချလိုသည့် ပစ္စည်းများကို ရက်လွန်နေမှု၊ မှိုတက်နေမှု ရှိ မရှိ ဆိုတာတွေကို ကုန်ပစ္စည်းရောက်ရောက်ခြင်း စစ်ဆေးပြီးမှ စားသုံးသူ များကို ရောင်းချစေလိုကြောင်း ဒါမှသာ ပြည်သူများ အနေဖြင့် အန္တရာယ်ရှိသော အစားသောက်များကို မစားသုံးမိကြမှာဖြစ်ကြောင်း မိမိတို့ဈေးသည်များ အနေဖြင့် လည်း ဈေးဝယ် သူများကို စေတနာထားရာ ရောက်ကြောင်း " အဆိုပါပူးပေါင်းအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဈေးသူ ဈေးသားများအား အသိပညာပေး ပြောကြားခဲ့သည်။
မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၊ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာနနှင့် မြို့နယ်စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် မြို့မဈေးအတွင်း ပြည်သူများစားသုံးရန်မသင့်သည့် တားမြစ်ထားသော စားသောက်ကုန်များ၊ ရက်လွန် အစားအစာ များ၊ မုန့်မျိုးစုံများ၊ အေးခဲအသားများနှင့် တရားမ၀င် ကြက်ဥများ ရောင်းချနေမှု ရှိ/ မရှိစစ်ဆေးခဲ့ပြီး၊ သိမ်းဆည်း ရမိသော အေးခဲကြက်သားထုပ်များနှင့် စာသောက်ကုန်ပစ္စည်းများအား အဆိုပါပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့က မီးရှို့ ဖျက်ဆီး ခဲ့ကြသည်။
ဆက်လက်၍ ဈေးသူဈေးသားများအား စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေး အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲကို မြို့နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန ရုံးအစည်း အဝေး ခန်းမတွင် မွန်းလွဲ ၁ နာရီ၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး မြို့နယ် မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး အသိပညာပေးလက်ကမ်း စာစောင်များ ကိုလည်း ဖြန့်ဝေပေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Originally published at - http://moigovnews.blogspot.com/2017/03/blog-post_32.html
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, March 04, 2017 No comments: